Xinhua Myanmar - တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အာဆီယံအကြား ဆက်ဆံရေး ထပ်မံမြှင့်တင်ရန် ကတိပြု
တရုတ် အာဆီယံ ဘရူနိုင်း ဆက်ဆံရေး
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိ (ယာ) နှင့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း (ASEAN) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် Lim Jock Hoi တို့ ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ မြို့တော် ဘန်ဒါဆရီဘီဂါဝန်တွင် ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်က တွေ့ဆုံစဉ် (ဆင်ဟွာ) Asia
အာဆီယံနှင့် ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံများအကြား ဆက်ဆံရေးများတွင် တရုတ်-အာဆီယံ ဆက်ဆံရေးသည် အတက်ကြွဆုံးနှင့် အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုအရှိဆုံးဖြစ်ကြောင်း၊ ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ကြွယ်ဝချမ်းသာရေးအတွက် အရေးပါသောထောက်တိုင်တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း ဝမ်က ပြောခဲ့သည်။
တရုတ်-အာဆီယံ ဆက်ဆံရေး တိုးတက်မှု နှင့် COVID-19 ကပ်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရန် အာဆီယံ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံး၏ အရေးပါသောကူညီထောက်ပံ့မှုကို တရုတ်နိုင်ငံက ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဝမ်က ပြောခဲ့သည်။
ယခုနှစ်သည် တရုတ်-အာဆီယံ ဆွေးနွေးဖက်ဆက်ဆံရေး နှစ် ၃၀ ပြည့်မြောက်သည့်အချိန်အခါလည်း ဖြစ်သည်။ နှစ်ဖက်အနေဖြင့် ယင်းအခွင့်အလမ်းကို နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားများ ကျင်းပရန်၊ ငါးနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ရန်၊ တရုတ်-အာဆီယံဆက်ဆံရေး အရှိန်မြှင့်တင်ရန်နှင့် တရုတ်-အာဆီယံ အေးအတူ၊ ပူအမျှ အသိုက်အဝန်းတစ်ခု တည်ဆောက်ရန် မျှော်လင့်ကြောင်းလည်း ဝမ်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် အာဆီယံနှင့်အတူ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့် တိုးမြှင့်ရန်၊ အခြားသော အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်၊ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် အပြာရောင်စီးပွားရေး (blue economy) မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်ရေး အတူတကွလုပ်ဆောင်ရန်၊ ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တရုတ်-အာဆီယံနှစ်ကို အောင်မြင်စေရေး ပူးတွဲဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားရေးနှင့် အခြားသောနယ်ပယ်များ၌ ပြည်သူအချင်းချင်းဖလှယ်မှုကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ခိုင်မာစေရန် ဆောင်ရွက်သွားလိုကြောင်း ၎င်းက ပြောခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံက အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံး၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများအား ပံ့ပိုးရေး၊ တရုတ်-အာဆီယံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ရန်ပုံငွေ ခိုင်မာရေးကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အာဆီယံ ဗဟိုအချက်အချာကျမှုကို စောင့်ထိန်းသွားမည်ဖြစ်သလို အာဆီယံနှင့်အတူ အခိုင်အမာ ရပ်တည်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝမ်က အလေးထားပြောခဲ့သည်။
အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း (ASEAN) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် Lim Jock Hoi က အာဆီယံ-တရုတ် ဆက်ဆံရေးသည် အာဆီယံအတွက် အလွန်အရေးပါကြောင်း၊ COVID-19 ကပ်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် အာဆီယံအား အခိုင်အမာ ပံ့ပိုးပေးခြင်းအတွက် တရုတ်နိုင်ငံကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ နှစ်ဖက်သည် ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးတည်ထောင်ခြင်း နှစ် ၃၀ ပြည့်မြောက်သည့်အခွင့်အလမ်းကို ဖမ်းဆုပ်လျက် ဆက်ဆံရေး ထပ်မံအရှိန်မြှင့်တင်သွားမည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်းလည်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
အာဆီယံအနေဖြင့် ယခုနှစ်တွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျော့ပါးရေး၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးနှင့် လျော့ပါးရေးတို့အပြင် ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများကို အလေးထားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံနှင့်အတူ ကုလသမဂ္ဂ၏ ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ် အစီအစဉ် အောင်မြင်မှုရရှိရန် ဆက်စပ်သောနယ်ပယ်များ၌ ခိုင်မာသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိရန်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုဆောင်ရွက်ရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း Lim က ဆိုသည်။
အာဆီယံသည် လွတ်လပ်၍ ပွင့်လင်းပြီး စည်းမျဥ်းများအခြေခံသည့် လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုစနစ်တစ်ခုကို ထိန်းသိမ်းထားရန်နှင့် ဒေသတွင်း စီးပွားရေးပြန်လည်နာလန်ထူမှု မြှင့်တင်ရန် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် နက်ရှိုင်းသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတည်ဆောက်ရာတွင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအား ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောခဲ့သည်။ (Xinhua)
BANDAR SERI BEGAWAN, Jan. 15 (Xinhua) -- Visiting Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi met with Lim Jock Hoi, secretary-general of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), here on Thursday, with both sides pledging to further enhance China-ASEAN relations.
ASEAN is committed to maintainingafree, open and rules-based free trade system and supports its member nations in deepening cooperation with China to accelerate regional economic recovery, he added. Enditem
-Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi (R) meets with ASEAN Secretary-General Lim Jock Hoi in Bandar Seri Begawan, capital of Brunei, on Jan. 14, 2021. (Photo by Jeffrey Wong/Xinhua)
Previous Article အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် အင်အားပြင်းငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့် လူပေါင်း ၄၂ ဦးသေဆုံးပြီး ၈၀၀ ကျော် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာ လူ ၁၅,၀၀၀ ခန့် နေအိမ်မှစွန့်ခွာခဲ့ရ
Next Article အိန္ဒိယနိုင်ငံ အာသံပြည်နယ်ရှိ Goroimari ရေကန်ကြီးတွင် ရွာသားများ ငါးဖမ်းပွဲတော်ကျင်းပ